မဒေါင်းလုပ် Video and Audio မဆော့ဝဲ မအဘို့ Windows
မဒေါင်းလုပ် Video and Audio မဆော့ဝဲ
ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်အသုံးအများဆုံးမာလ်တီမီဒီယာကစားသမားများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သော Winamp ဖြင့်သင်သည်မည်သည့်ပြသနာမှမရှိဘဲအသံနှင့်ဗီဒီယိုဖိုင်အမျိုးအစားအားလုံးကိုကစားနိုင်သည်။ Winamp ကို install လုပ်စဉ်အတွင်းသင်ဆန္ဒနှင့်အညီအစီအစဉ်နှင့်သက်ဆိုင်သော setting များစွာကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည်။ သင် install...
Adobe Premiere Pro သည်ဗွီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသောအချိန်ဇယားသဘောတရားနှင့်အတူအချိန်မီဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ရေးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မီဒီယာပုံစံအမျိုးမျိုးကိုပရိုဂရမ်သို့သင်တင်ပို့နိုင်သည်။ သင် 10,240 x 8,192 resolution အထိတည်းဖြတ်နိုင်သည့်ပရိုဂရမ်သည်၎င်း၏ 3D...
YouTube Downloader Converter သည် YouTube နှင့်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များမှဗွီဒီယိုများကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ရန်နှင့်ကွဲပြားသောအသံနှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်များသို့ပြောင်းရန်သင်သုံးနိုင်သောအခမဲ့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောဗွီဒီယိုများကိုဖွင့်ရန်အတွက် built-in မီဒီယာဖွင့်စက်ပါရှိသည်။ YouTube ဗွီဒီယိုကူးယူစက် YouTube Downloader Converter သည်...
DAEMON Tools Lite သည်ပုံရိပ်ဖိုင်များကို ISO, BIN, CUE extensions များဖြင့်အလွယ်တကူဖွင့်နိုင်ပြီး virtual disk များ ဖန်တီး၍ အခမဲ့ disk ဖန်တီးသည့် program တစ်ခုဖြစ်သည်။ DAEMON Tools Lite သည်အခမဲ့နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဆော့ (ဖ်) ဝဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးအသုံးပြုသူများကို ၄ င်းတို့၏ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင် virtual disk များ (drives)...
Fraps သည်အသုံးပြုသူများအား gameplay ဗီဒီယိုများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်၊ screenshots များရိုက်။ သူတို့၏ကွန်ပျူတာကို benchmark လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည့် screen recording program တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂိမ်းဗွီဒီယိုများရိုက်ကူးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ထဲပေါ်ပေါက်လာသည့်ပထမဆုံးဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည့် Fraps...
Bandicam ကို download လုပ်ပါ Bandicam သည် Windows အတွက်အခမဲ့ screen recorder ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်၎င်းသည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မည်သည့်အရာကိုမဆိုအရည်အသွေးမြင့်ဗီဒီယိုအဖြစ်ဖမ်းယူနိုင်သော screen သေးငယ်သည့်မှတ်တမ်းတင်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ PC မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်သီးခြားဧရိယာတစ်ခုကိုသင်မှတ်တမ်းတင်နိုင်သလို DirectX/OpenGL/Vuhan ဂရပ်ဖစ်နည်းပညာများ...
Filmora Video Editor သည်အသုံးပြုသူများအားဗီဒီယိုဖြတ်တောက်ရန်၊ ဗွီဒီယိုပေါင်းစည်းရန်၊ ဗွီဒီယိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများထည့်ရန်ကူညီသည့်လက်တွေ့ကျသောဗွီဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ မင်းအိပ်မက်ထဲကဗီဒီယိုများကို Filmora Video Editor ဖြင့်ဖန်တီးနိုင်သည်၊ အငြိမ်းစားယူပြီးနောက် Windows Movie Maker အစားသင်သုံးနိုင်သောအခြားဆော့ဝဲလ်။ Filmora Video...
Camtasia စတူဒီယိုသည်အကောင်းဆုံးဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်ခြင်းပရိုဂရမ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ရန်နှင့်ကျယ်ပြန့်သောဗွီဒီယိုတည်းဖြတ်ရေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသည့်အောင်မြင်သောမျက်နှာပြင်ဗွီဒီယိုရိုက်ကူးသည့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်မှနောက်ဆုံးပေါ် Camtasia Studio 2021 ဗားရှင်းကိုသင်ကူးယူနိုင်သည်။...
UltraISO ဖြင့်သင် CD / DVD ပုံရိပ်ဖိုင်များကိုဖန်တီးတည်းဖြတ်နိုင်သည်၊ သင်၏ပုံဖိုင်များကိုဖွင့်နိုင်သည်။ ISO ဖိုင်များကိုတိုက်ရိုက်တည်းဖြတ်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ရှိသောပြိုင်ဘက်များနှင့်ထူးခြားသောဤပရိုဂရမ်သည်လူသိများသောလူကြိုက်များသော disk image file formats များကိုထောက်ပံ့သည်။ ကွဲပြားခြားနားသော Virtual Drives ၈...
PowerISO သည် CD, DVD သို့မဟုတ် Blu-Ray image files များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အခါသင်ရည်ညွှန်းနိုင်သောအောင်မြင်မှုအရှိဆုံး virtual disc tool များအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ PowerISO သည်အခြေခံအားဖြင့် ISO, BIN, NRG, CDI, DAA စသဖြင့်ဖိုင်ဖိုင်များနှင့်ပတ်သက်သောသင်၏လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော software ဖြစ်သည်။ PowerISO...
နေ့စဉ်တက်ကြွစွာအသုံးပြုသူ ၁၅ သန်းနှင့်အတူ Shazam သည်ဂီတအသစ်ကိုရှာဖွေရန်အမြန်ဆုံးနှင့်အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သောလူကြိုက်များသောတေးဂီတအက်ပလီကေးရှင်းသည်အချိန်တိုအတွင်းလက်ရှိဖွင့်ထားသောဂီတကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးသင်သိချင်သောသီချင်းနာမည်ကိုသင်ကူညီရန်ကူညီသည်။ သင်လုပ်ရန်မှာ Shazam app ကိုဖွင့်ပြီး Shazam သင်္ကေတကိုနှိပ်ပါ။...
Krisp သည် Windows PC အသုံးပြုသူများကိုအခမဲ့ဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ ရသောဆူညံသံပယ်ဖျက်သည့်ပရိုဂရမ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Skype, WhatsApp၊ Google Hangouts စသည့်ဗီဒီယိုချက်တင်ခြင်း၊ အသံခေါ်ဆိုခြင်းနှင့် YouTube တွင်ထုတ်လွှင့်နေစဉ်နောက်ခံဆူညံသံကိုပိတ်ဆို့ရန်နှင့်နောက်ခံဆူညံသံများကိုဖယ်ရှားရန်သင်အသုံးပြုနိုင်သည်။...
Jihosoft 4K Video Downloader သည် YouTube ဗီဒီယိုကူးယူသူအဖြစ်ထင်ရှားသော်လည်း Facebook, Instagram နှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှဗွီဒီယိုများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ထောက်ပံ့သည်။ 720P, 1080P, 4K နှင့် 8K resolution ဗီဒီယိုများပင်လျှင်ကွန်ပျူတာသို့ကူးယူရန်သင်အသုံးပြုနိုင်သောမြန်ဆန်လွယ်ကူပြီးလက်တွေ့ကျသောဗွီဒီယိုကူးစက်။ Jihosoft 4K Video Downloader...
Apple Music Converter သည်ဂီတဖိုင်များပေါ်တွင်သင်၏ထိန်းချုပ်မှုကိုချဲ့ထွင်နိုင်သောပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ဂီတဖိုင်များကိုသင်အလိုရှိသောပုံစံသို့ပြောင်း။ ပရိုဂရမ်ရှိသင်၏စက်ပစ္စည်းများပေါ်တွင်၎င်းတို့ကိုဖွင့်နိုင်သည်၊ ၎င်းကိုသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တပ်ဆင်။ အခမဲ့ကြိုးစားနိုင်သည်။ Music Music Converter...
iFun Screen Recorder သည် Windows PC အသုံးပြုသူများအတွက်လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်ပြီးအခမဲ့မှတ်တမ်းတင်နိုင်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ဂိမ်း၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စတွေအတွက်အကောင်းဆုံး screen recorder ။ ရေဒီယိုအမှတ်တံဆိပ်မပါဘဲ HD အရည်အသွေးဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ မိုဘိုင်းနှင့် desktop...
Gihosoft TubeGet သည်အခမဲ့ YouTube ဗီဒီယိုဒေါင်းလုပ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ သင့်ကွန်ပျူတာသို့ YouTube ဗီဒီယိုများကူးယူရန်၊ YouTube ဗီဒီယိုများကို MP3 အဖြစ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်၊ YouTube ဖွင့်ရန်စာရင်းများကို download ပြုလုပ်ရန်ပရိုဂရမ်တစ်ခုလိုအပ်လျှင် Gihosoft TubeGet ကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။ Gihosoft TubeGet သည်အကောင်းဆုံး YouTube...
WavePad Sound Editor သည်မည်သည့်ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည့်အသံတည်းဖြတ်ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းကိရိယာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုရလွယ်ကူသောပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၎င်းတွင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသံကိရိယာများစွာပါရှိသည်။ ပရိုဂရမ်ကိုတပ်ဆင်နေစဉ်ပေါ်လာမည့်မီနူးတွင်၊ သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိအသံကိရိယာအမျိုးမျိုးကိုသင် install...
Apowersoft Desktop Screen Recorder သည်အသုံးပြုရလွယ်ကူသော desktop tool တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင့်ကွန်ပျူတာ၏ဖန်သားပြင်များကိုသင်သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ WMV အမျိုးအစားကူးယူခြင်းဖိုင်များကို AVI, MP4, FLV နှင့် SWF ပုံစံများသို့သင်၏စခရင်ရိုက်ကူးခြင်းဗွီဒီယိုများကို standard WMV format...
ဗွီဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်းအတွက်အခမဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုရှာဖွေနေသောအသုံးပြုသူများကို DaVinci Resolve ကဆွဲဆောင်သည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုရန်အတွက်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ရေးပရိုဂရမ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သော Blackmagic Design DaVinci Resolve ကို Windows PC, Mac နှင့် Linux ပလက်ဖောင်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အထက်ပါ Download DaVinci Resolve...
တိကျသောဗွီဒီယိုဘောင်တစ်ခုအားဖျက်စီးခြင်း၊ မလိုလားအပ်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုဖျက်ခြင်းနှင့်ကလစ်များကိုတစ်ချက်တည်းဖြင့်ပေါင်းစည်းခြင်း။ ဒီဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ရေးဆော့ (ဖ်) ဝဲသည် ၁၆: ၉၊ ၄၊ ၃၊ ၁: ၁၊ သင်၏ဗွီဒီယိုကိုလည်ပတ်မှုစနစ်အားလုံးတွင်ချောမွေ့စွာထောက်ပံ့ပါလိမ့်မည်။ BeeCut သည်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်သူဖြစ်ပြီးဖြတ်ခြင်း၊ ဖြတ်ခြင်း၊ ပေါင်းခြင်း၊...
GOM Encoder သည် ၀ င်းဒိုးအသုံးပြုသူများအတွက်အလွယ်တကူသုံးနိုင်။ မြန်ဆန်သောဗွီဒီယိုပြောင်းစက်ဖြစ်သည်။ ကျယ်ပြန့်သော input နှင့် output format ပံ့ပိုးမှု၊ multi-converting၊ Intel Quick Sync Video support၊ စာတန်းထိုးထည့်ခြင်း၊ အသံဖယ်ရှားခြင်း၊ သင်မြန်သော video converter ကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။ ...
Virtual DJ သည် mp3 ရောနှောခြင်းအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Carl Cox လိုနာမည်ကြီး DJ များပင်သူတို့၏ကွန်ပြူတာများ၌ရှိသည့်ဤအလွန်ကောင်းမွန်သောအစီအစဉ်ကြောင့်သင်သည်တကယ့် DJ တစ်ယောက်အနေနှင့်ခံစားရလိမ့်မည်။ တေးဂီတကိုနှစ်သက်သူတိုင်းနှစ်သက်ကြမည့်ဤအစီအစဉ်ဖြင့်အသံများကိုဖြတ်တောက်ခြင်း၊...
AnyBurn သည်သင်၏စီဒီ၊ ဒီဗီဒီနှင့် Blu-ray discs များပေါ်တွင်အချက်အလက်များကိုကူးယူရန်သင်အသုံးပြုနိုင်သည်သေးငယ်ပြီးရိုးရှင်းသောအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆင့်တိုင်းရှိကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများအလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်သည့်ပရိုဂရမ်သည်မည်သည့်ကွန်ပျူတာအတွေ့အကြုံမှမလိုအပ်ဘဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းတီထွင်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ...
Corel VideoStudio သည်ဗွီဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်းပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ DVD လောင်ကျွမ်းခြင်းဆိုင်ရာရွေးချယ်မှုများ၊ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလများ၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ YouTube၊ VideoStudio ကို download လုပ်ပါ Corel ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗွီဒီယိုအယ်ဒီတာဖြစ်သော VideoStudio...
8K Player သည်သင်၏ desktop ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်သင်သုံးနိုင်သောဗီဒီယိုဖွင့်စက်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏သက်တူရွယ်တူများထက်ပိုမိုစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော 8K Player ဖြင့်သင်သည်ဗီဒီယိုများကို 8K resolution အထိဖွင့်နိုင်သည်။ အဆင့်မြင့်သောဗွီဒီယိုဖွင့်စက်တစ်ခုအဖြစ်ထင်ရှားပြီး 8K Player သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောကြည့်ရှုခံစားနိုင်သည့်ကစားသမားဖြစ်သည်။...
CamDesk သည်အခမဲ့ကင်မရာမှတ်တမ်းတင်ခြင်းပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအသုံးပြုသူများသည်ဝက်ဘ်ကင်မရာဗွီဒီယိုများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်နှင့်ဝက်ဘ်ကင်မရာဓာတ်ပုံများကိုရိုက်ကူးရန်ကူညီသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ကင်မရာကိုဝယ်သောအခါ၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးဗီဒီယိုချက်တင်စတင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ webcam ကိုဤရည်ရွယ်ချက် မှလွဲ၍...
EaseUS သည်သူ၏အောင်မြင်သောပရိုဂရမ်များကိုယခုထိတီထွင်ခဲ့သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သိထားသည်မှာ၎င်းသည်၎င်း၏ application အသစ်ကိုစတင်ခဲ့သည်။ EaseUS RecExperts သည် ၀ င်းဒိုးဖန်သားပြင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အသုံးပြုနိုင်ပြီး၎င်းသည်သူပေးထားသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ဖန်သားပြင်ရိုက်ကူးခြင်း၊...
Audacity ဟာဒီလိုမျိုးအောင်မြင်မှုအကောင်းဆုံးဥပမာတွေထဲကတစ်ခုပါ။ ဒါ့အပြင်သင်ဟာအခမဲ့ကူးယူနိုင်တဲ့အသံတည်းဖြတ်ခြင်းနှင့်အသံဖမ်းခြင်းဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Audacity သည်အခမဲ့သော်လည်း၎င်းသည်အတော်အတန်ကြွယ်ဝသောနှင့်အဆင့်မြင့်အင်္ဂါရပ်များပါဝင်သည်။ Audacity ကိုသုံးပြီးသင့်ကွန်ပျူတာထဲမှာသိမ်းထားတဲ့အသံဖိုင်ဖိုင်တွေကိုလုပ်နိုင်တယ်၊...
Express Burn သည် CD / DVD လောင်ကျွမ်းသောအမျိုးအစားများရှိအစွမ်းထက်။ ရှုပ်ထွေးသောပရိုဂရမ်များနှင့်မတူဘဲဖိုင်အရွယ်အစားနှင့်လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်သည့် CD / DVD / Blu-ray burn program တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအထူးအသုံးချပရိုဂရမ်သည်အသုံးပြုသူများစွာအသုံးပြုသောအပလီကေးရှင်းများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည့် Nero နှင့်အောင်မြင်သောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။...
mixtape နှစ်များကုန်လွန်သွားသော်လည်းဂီတသမားနှင့်ဂီတဝါသနာရှင်များစွာသည်သူတို့၏အကြိုက်ဆုံးအပိုင်းအစများကိုပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်အသစ်သောအရာများဖန်တီးရန်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေကြသည်။ အကယ်၍ တကယ့် DJ Deck တစ်ခုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးရှုပ်ထွေးနေလျှင်အသံလွှင့်ချက်တစ်ခုကိုချက်ချင်းစတင်ခြင်းဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရန်ကော။...
Ashampoo Video Deflicker သည်သင်၏ဗွီဒီယိုများတွင်တုန်ခါမှုကို fix ရန်သင်အသုံးပြုနိုင်သည့်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်သို့မဟုတ်လေယာဉ်ကွင်းများတွင်တွေ့ရသောပန်ကာလှုပ်ခြင်းအပါအ ၀ င်မတည်ငြိမ်သောဗီဒီယိုများအားအလိုအလျောက်ပြုပြင်ပေးသည့်ကောင်းမွန်သောအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အသေးစားအရွယ်အစားနှင့်အသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်! အကယ်၍...
မှတ်ချက် - ဒီပရိုဂရမ်ဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလို့ဖယ်ရှားထားတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Format Converters အမျိုးအစားကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သောအစီအစဉ်များကိုရှာနိုင်သည်။ Free AVI Converter သည်သင်၏ကွန်ပျူတာရှိ AVI format...
အချိန်ကြာမြင့်စွာကြာမြင့်စွာသောသီချင်းနားထောင်ခြင်းဆိုင်ရာအပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သော Spotify သည်၎င်း၏ကျယ်ပြန့်သောဂီတမှတ်တမ်းကိုအခမဲ့ပေးသောကြောင့်ဂီတနားထောင်သူများအားလုံးကိုနှစ်သက်သည်။ Spotify ၀ င်းဒိုးအက်ပလီကေးရှင်းဖြင့်သင်လိုချင်သည့်တေးဂီတကိုသင်အလွယ်တကူနားထောင်နိုင်သည်။ Spotify Windows download ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် application ကို...
StaffPad သည်ဂီတကိုအလွယ်တကူရေးလို။ လက်ရေးဖြင့်မှတ်သားသောအရာဖြင့်ရေးသားလိုသူများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ သင်၏တေးဂီတကို Apple Pencil ဖြင့်သာရေးပါ။ App သည်ဘားတစ်ခုစီကိုအလိုလိုသိလွယ်ကူသည့်လှပသောဖောင့်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးပြီးလျှင်မြန်သောထိ (သို့) Pencil ကိရိယာများကိုထပ်မံတည်းဖြတ်နိုင်သည်။ StaffPad...
DJ Audio Editor သည်အသုံးပြုသူများအားအသံဖိုင်များကိုဖန်တီးရန်နှင့်တည်းဖြတ်ရန်အလွန်အသုံးဝင်သောပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပရိုဂရမ်သည် MP2, MP3, WMA, OGG နှင့် CDA စသည့်လူသိများသောအသံဖိုင်အမျိုးအစားအားလုံးကိုထောက်ပံ့သည်။ ...
အခမဲ့ AVI to MP4 Converter သည်အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ hard drives ရှိ AVI ဗီဒီယိုဖိုင်များကို MP4 ဗီဒီယိုဖိုင်များအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောအခမဲ့ဗီဒီယိုပြောင်းလဲခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ ...
ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာသိခဲ့သော Winamp ၏ Lite ဗားရှင်းသည်အထူးသဖြင့် netbook အသုံးပြုသူများအတွက်အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Winamp ၏ကျယ်ပြန့်သောအင်္ဂါရပ်များကိုအသုံးချမည့်အစားကျွန်ုပ်၏အခြေခံဂီတဖွင့်စက်ကိုရှာသောအသုံးပြုသူများအားလုံးသည်ဤ ပေါ့ပါးသော” ဗားရှင်းကို ပို၍ နှစ်သက်ကြလိမ့်မည်။...
Easy Audio Converter သည်အသံဖိုင်အမျိုးမျိုးကိုပြောင်းနိုင်သောအသုံးဝင်သောအသံပြောင်းစက်ဖြစ်သည်။ WAV နှင့် MP3 ကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များတွင်၎င်းသည် WAV ဖိုင်မှ MP3 ပြုလုပ်ရာတွင်ပရိုဂရမ်ကသင့်အားကူညီသည်။ အချို့ကိရိယာများသည်အချို့သောအသံဖိုင်များနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊...
Apowersoft Free Audio Recorder သည်အသံနှင့်အသံထုတ်လွှင့်မှုများမှတစ်ဆင့်အသံကိုအသံသွင်းရန်အသုံးဝင်ပြီးစိတ်ချရသောအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မိုက်ခရိုဖုန်းချိန်ညှိချက်များပြုလုပ်ပြီးနောက်ပရိုဂရမ်၏အချိန်ကိုက်ကိရိယာ၏အကူအညီဖြင့်အသံဖမ်းခြင်းကိုစတင်ရန်အချိန်ကိုသင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ Apowersoft Free Audio Recorder သည်စနစ်အသံ၊...
iTunes, အခမဲ့မီဒီယာဖွင့်စက်နှင့်အက်ပလီကေးရှင်းကို Mac နှင့် PC တို့အတွက်တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး၊ ဒီဂျစ်တယ်တေးဂီတနှင့်ဗွီဒီယိုများ၊ iPod နှင့် iPod touch မော်ဒယ်များ၊ Apple ၏နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာ၊ ခရီးဆောင်ဂီတပစ္စည်းအသစ်များ၊ လူကြိုက်အများဆုံးဖုန်းသည်၎င်း၏ထုတ်ကုန်များနှင့်အတူအပြည့်အဝမြန်ဆန်စွာဖြင့်သူ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုဆက်လက်ပြုလုပ်သည် iTunes...
မည်သည့် Video Recorder မဆိုအသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ desktop သို့မဟုတ် browser ပေါ်တွင်ဗီဒီယိုများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ခွင့်ပြုထားသည့်အလွန်အသုံး ၀ င်ပြီးစိတ်ချရသောပရိုဂရမ်ဖြစ်သည်။ အလွန်ရိုးရှင်းပြီးသန့်ရှင်းသောသုံးစွဲသူမျက်နှာပြင်ပါသောပရိုဂရမ်သည်အသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ သင်ငှားရမ်းထားသော DVD...
အကောင်းဆုံးအခမဲ့ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ရေးပရိုဂရမ်ဖြစ်သော Clipchamp ဖြင့်သင်သည်အထင်ကြီးစရာကောင်းသောဗီဒီယိုများဖန်တီးနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူအတွက်လွယ်ကူသောဗွီဒီယိုအယ်ဒီတာသည်ကော်ပိုရေးရှင်း၊ ပညာရေး၊ မြှင့်တင်ရေး၊ လူမှုမီဒီယာကြော်ငြာဗီဒီယိုများနှင့်အခြားအရာများကိုအလွယ်တကူဖန်တီးနိုင်သည်။ နိုင်ငံပေါင်း ၂၀၀ ကျော်မှသုံးစွဲသူ ၁၆ သန်းကိုဆက်သွယ်ပါ။ Clipchamp...
CDBurnerXP သည်အခမဲ့ကူးယူနိုင်သော CD ကူးစက်ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအသုံးပြုသူများသည် CD များကူးယူရန်၊ DVD များကူးယူရန်၊ Blu-Rays များကိုကူးယူရန်၊ တေးဂီတစီဒီများကိုပြုလုပ်ရန်၊ CDBurnerXP ကို ​​download လုပ်ပါ CD, DVD သို့မဟုတ် Blu-Ray လောင်ကျွမ်းခြင်းဖြစ်စဉ်များအတွက်သင်အသုံးပြုနိုင်သောအအောင်မြင်ဆုံးဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည့် CDBurnerXP...
Spotify Recorder သည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲဖြစ်ပြီး Spotify တွင်သင်နားထောင်သောသီချင်းများကိုသိမ်းဆည်းပြီးသင့်ကွန်ပျူတာသို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကြီးမားဆုံးဒီဂျစ်တယ်ဂီတ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သော Spotify ကိုအသုံးပြုသူတစ် ဦး...
ဗီဒီယိုမှရုပ်ပုံသည်သုံးစွဲသူများအကြိုက်ဆုံးဗွီဒီယိုများ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုသတ်မှတ်ခြင်းအားဖြင့် GIF format ဖြင့်ကာတွန်းဖန်တီးရန်အသုံးပြုသူများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောအလွန်အသုံးဝင်သောပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ...
BurnAware သည်သင်၏ဂီတ၊ ရုပ်ရှင်များ၊ ဂိမ်းများ၊ စာရွက်စာတမ်းများနှင့်ဖိုင်များကိုသင့်ကွန်ပျူတာရှိ CD / DVD များပေါ်တွင်ကူးယူရန်တီထွင်ထားသောအခမဲ့ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ BurnAware Free သည်အချက်အလက်အမျိုးမျိုးကိုအရန်ကူးယူခြင်းဖြင့်သင်နှင့်အတူသယ်ဆောင်နိုင်သည်၊...
bitRipper သည်အခမဲ့ပြီးအသုံးဝင်သောပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်၏ DVD များအားသင်၏ကွန်ပျူတာထဲသို့ AVI format ဖြင့်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်သိမ်းဆည်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ ပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုရန်သင် DVD ကို DVD drive ထဲသို့ထည့်ပြီး bitRipper program ကိုဖွင့်ပြီး start ripping ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ဒါကဘယ်လောက်လွယ်ကူတယ် သင်လိုချင်ပါက၊ သင်သိမ်းချင်သော AVI format...